I-Jacuzzi eshisayo, i-Rooftop Mountain/Ocean View Villa2 - I-Airbnb
I-Jacuzzi eshisayo, i-Rooftop Mountain/Ocean View Villa2
Uma uvuka kule SUPER SPACIOUS APARTMENT, ungakwazi ukujabulela ukubuka okuhle kwe-MOUNTAIN ne-OCEAN kuyilapho uphuza ikhofi lakho lasekuseni, ifulethi elithokomele, amanzi ahlungiwe mahhala anesistimu yokuhlunga yobuciko, amakamelo okulala angu-2 anombhede wenkosi onethezekile, uhamba ngezinyawo. ekhabetheni ukuze uhlele izingubo zakho, ithelevishini, ikhishi, i-thread mill, i-wifi nababungazi abathandekayo abalungele ukukuqondisa ngaso sonke isikhathi.
Uma uvuka uphumela ngaphandle futhi ujabulele umoya ohelezayo we-caribean futhi uwuvumele ukukuphulula, ujabulele ukubukwa okuhle kolwandle kuyilapho uphuza ikhofi lasekuseni ophahleni ngokubukwa okumangalisayo.
umbhede othokomele umbhangqwana, ukukhanya okuhle, ikhishi, igumbi lokugezela elihlelekile, igumbi lokuphumula kanye nendawo yokudlela.
4.85 · 159 okushiwo abanye
Indawo yalapha ithule futhi ihloniphekile. Kubhekwa njengenye yezindawo eziphephe kakhulu nezisezingeni eliphezulu ePuerto Plata. Inamaphoyisa angama-24/7. I-Villa ibiyelwe ngokuphelele futhi ifakwe i-Camara Security System yangasese.
Sizohlale sikhona ukuze sikuqondise, ifulethi liseduze kakhulu nezindawo ezikhanga izivakashi. Ngaphandle kwalokho sizokuqondisa ukuthi ungathola kanjani ezokuthutha edolobheni futhi ube nomuntu ohlale etholakala ukuze akusize uzulazule ku-villa nganoma yiziphi izidingo onazo.
Sizohlale sikhona ukuze sikuqondise, ifulethi liseduze kakhulu nezindawo ezikhanga izivakashi. Ngaphandle kwalokho sizokuqondisa ukuthi ungathola kanjani ezokuthutha edolobheni fut…